7 Off Iyo Beaten Path maKufambisa MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 7 Off Iyo Beaten Path maKufambisa MuEurope
Kufamba uye kutsvaga nzvimbo nyowani kunotipa mapapiro ekurota, tete, uye dzidza. Munyika yakakura kudaro, zvinenge zvisingaite kuona zvese, zvakare hazvigoneke kusangana uye kunakidzwa kunzvimbo dzose muEurope. Nenzvimbo zhinji dzinonakidza, iwe unogona chete kurota kwekuwana ivo vese. Kana iwe uri kunyatsotarisa kunakidzwa senge yemunharaunda uye yakazarukira nzira itsva, ipapo tinazvo 7 chinoshamisa pane chakarohwa nzira kuenda kwaunowana.
Kubva kuFrance kuenda kuSwitzerland, 7 mavara ezvisikwa, nyanja dzakadzikama, uye enchanted castles vakamirira kuve chikamu chenyu pikicha album yezororo risingakanganwike muEurope. saka, rongedza mwenje uye gadzirira kutakura chete ndangariro uye nyaya newe, paunotanga rwendo rutsva, uye famba nenzira dzisina kufamba zvishoma.
1. Off Iyo Beaten Path maKinos: Occitanie, Furanzi
Yakaganhurwa neGungwa reMedithera uye nemakomo evaPyrenees, iyo nzvimbo yeSouthern Occitanie muFrance inotyisa. Imba kune medieval fort guta, yakanaka Toulouse, mahombekombe, uye waini, iyi nharaunda yeFrance inonakidza uye inotyisa kubva pakurohwa nzira yekuenda kuEurope kuisa kumusoro pane ako mabheji runyorwa.
Occitanie zvakasiyana chaizvo neFrench Riviera uye Paris, nekuda kwekukurumidza uye kurota kwayo kumhanya. saka, iwe unogona kutora nguva yako kuongorora iyo Cathar Nyika uye nhare dzayo, kusanganisira inonakidza Carcassonne. Kana iwe uchida zviitiko zvekunze sekukwira makumbo kana kufurifeta, ipapo Gorges du Tarn kanyoni neCevennes National Park zvakanakisa. The national Park inzvimbo yeUNESCO yezvinhu zvipenyu, uye imwe yemapaki enyika gumi muFrance.
Iwe unogona kugadzira hwaro hwenyu mumusoro wedunhu rune pink nerinotapira, Toulouse, kana iro guta rinoyevedza reAlbi. Ose ari maviri akanaka kubva munzira yakarohwa kuputsa kweguta muFrance uye refu refu uye Zororo reFrance. Iwe waigona nyore uye nenzira yakanakira kusvika kuToulouse nechitima kufamba kubva kuParis neBarcelona munenge 5 maawa.
Roni kuenda kuToulouse neTreni
Paris kuenda kuToulouse neTreni
Zvinonaka Kubata neTreni
Bordeaux kuti Toulouse neTreni
2. Hallstatt, Ositiriya
Hallstatt musha musha-wakanakisa musha uri pane Lake Hallstatt. Muchirimo, kuwa, kana chando, iparadhiso chaiyo mune chero mwaka wegore, kupa akawanda ezvekunze zviitiko kune adrenaline vanofarira vafambi. Kana pane zvinopesana, kana iwe uri kurota kuchizunza nedziva negirazi rewaini kana pakukwira chikepe kutenderera dziva, Hallstatt ndiyo yakakodzera nzvimbo yekuenda.
ichi nzvimbo inoyevedza vakaita kuti zvive zvedu 7 kubva pakarohwa nzira kuenda kuEurope rondedzero kuvonga kune mapako ane simba, girazi rebhuruu, uye Mupata weEchern nawo dzinokatyamadza maonero uye nzira. Tisingatauri, kuti chichiwanikwa pamwe nenyika.
Hallstatt ndizvo 3 maawa kubva kuVienna nechitima chekufamba. saka, kana iwe uchida zororo risingakanganwiki munzvimbo dzinofema dzeAustria, uye Chikurukuru kure nechaunga, ipapo Hallstatt ndiyo yakakwana kubva pakarohwa nzira yekuenda.
Munich kusvika Hallstatt neTreni
Innsbruck ku Hallstatt neTreni
Passau kusvika Hallstatt neTreni
Rosenheim kuenda kuHallstatt neTreni
3. Off Iyo Beaten Path maKinos: Haarlem, The Netherlands
Zvishoma inozivikanwa kupfuura vavakidzani vayo Amsterdam uye Rotterdam, Haarlem ndiyo yakanyanya kunaka pane yakarohwa nzira guta muNetherlands. chete 18 maminetsi kubva Amsterdam nechitima, Haarlem runako ruchakubatsira iwe kweinenge vhiki refu.
Nhaka yeguta medieval, mweya inosekesa nemhepo dzemhepo, gadzira zvinoshamisa mamiriro. Kana iwe uchida kusangana neHolland seDutch chaiyo, ipapo famba munzira dzayo dzakatetepa, kusvika kuna Grote Markt. ndokubva, kwira mhepo, Chigayo cheAdriaan, zvekuona zvinoshamisa kweguta nerwizi.
Another great way to spend your vacation in Haarlem is to visit the oldest breweries. Dzokera mukati 1620, ipapo 100 nzombe, uye nanhasi uchiri kugona kuravira zvimwe zvekubika zvekare. Zvirinani, mushure mekushanyira kune imwe yemamyuziyamu akawanda muguta, uye zviripo mamwe mamuseum muHaarlem pane rimwe guta ripi zvaro reDutch.
Kupedza, ichi chakarohwa track track guta gem yakavanzika muEurope nyika dzinodisisa uye zvakakodzera kushanya!
4. Lake Orta, Itari
Vazhinji vashanyi vanoenda kuItari kun kuravira Italian chili uye unakirwe nehupenyu zvishoma, sezvinoita vemuno. zvisinei, kune zvakawanda kuItaly kupfuura kupeta a Girazi waini nechangobva kugadzirwa pasita. Lake Orta iri munyanza 'mudunhu inoshamisa uye ine rudo nzvimbo. Yakavanzika pakati pamakomo, uye akaparadzaniswa kubva kune inozivikanwa Nyanza Maggiore naMonte Mottarone, Lake Orta yakakodzera kunamatira kwako kwakazara, uye nguva yekuona Italy kubva pakurohwa track uye nekudzikama kwehupenyu.
From Hiking mudungwe munzira, chikepe Vatasvi, waini pedyo nedziva, uye kushambira, Lake Orta inoshamisa yeItalia gem, izvo zvichawanikwa nevashanyi.
Lake Orta rwendo rwemaawa maviri kubva ku Milan, uye 5 maawa kubva kuZurich kuburikidza nemaonero anoyevedza eAlps.
5. Off Iyo Beaten Path maKinos: Bohemia, Czech Republic
Angori maawa mashoma kure nekubvunda uye kubatikana kwePrague, iyo nyika yengano uye nzvimbo dzakanaka dzakamirira. Ipaki yenyika yeBohemian Switzerland, Czech Svycarsko National Park, iri kumuganhu neGermany. Pravcicka Brana, dhizaini rinoshamisa, matsime emvura, uye dzakawanda nzira dzinofamba munzira, rwendo rufupi rwechitima kure neDecin, iro guta rakanakisa.
Imwe nzvimbo yakachengetedzwa munzvimbo dzinoshamisa dzekunze ndiyo Kladska Zvisikwa zvisikwa. There’s a beautiful trail to the lake, uye inonyanya kushamisa mukudonha. asi, kana uchida madhorobha madiki uye chateaux, ipapo iwe uchada neo-Gothic Hluboka Chateau.
6. Antwerp, Bherujiyamu
Pabhasikoro kana tsoka, Antwerp inonakidza uye inoratidzika. Guta repiri pakukura muBelgium, Antwerp inonyanyo pererwa nevashanyi. zvisinei, zvinoshamisa kubva munzira yakarohwa yekuenda kuEurope kunakidzwa vhiki kupera.
Guta rakakamurwa kuva 3 nzvimbo: guta rekare, Maodzanyemba, uye chiteshi, idzo dzimba kune tsika dzakasiyana uye vanhu vanobva pamusoro penyika. saka, idenga rakarereka, kushumira chero chinhu chinoda moyo wako. Minyuziyamu, Musika wakakura, machechi, yepamusoro-notch yekugadzira mafashoni, vangori awa chete kubva kuguta guru, nechitima.
saka, kana iwe uchifarira yako chaiyo mangoda kubva kunzvimbo inonyanya kubhizimuka yedhayimondi, rudo chocolate, uye kutenga, izvi kubva pakarohwa track yekuenda kunofanirwa.
7. Off Iyo Beaten Path maKinos: Lucerne, Siwizarendi
Kurongeka kwakanaka kwekutorerana rudo muSwitzerland, Lucerne yakaisvonaka. Kufamba padziva, kutarisa Mount Pilatus neGomo reChitlis matutu echando anoratidzira mumvura, vasina vashanyi vanokenderedza, hope dzeSwitzerland.
Lovely Lucerne huru chigadziko che zuva nzendo kuenda kuAlps, uye ichiri kuwanikwa nevafambi. Saka iwe unowana mukana unokosha wekuti unakirwe nawo uye kuongorora Switzerland kubva pakurohwa nzira. Famba iyo Shato nzira uye edza simba rako pane tambo park, ayo ari maviri akanakisa ekunze zviitiko akapoterera Lucerne.
Inowanikwa pasi pegomo reAlps kumuganhu weSwitzerland-Germany, Lucerne isingakanganwiki kubva munzira yakarohwa yekuenda kuEurope. Lucerne idombo rakavanzika pakati peSwitzerland uye iri juri paawa nechitima kubva kuSwitzerland airport.
Zurich kuenda kuLucerne neTreni
Bern kuna Lucerne neTreni
Geneva kuna Lucerne neTreni
Konstanz kuna Lucerne neTreni
Kupedza, Europe izere nezvinoshamisa, ngano, zvakavanzika, uye zvakasikwa zvisina kubatwa nevashanyi. Kana iwe uchishuva chiitiko chinoshamisa uye inonzwa yenyika dzepamusoro muEurope. zvisinei, kana uchida kufamba, sezvinoita vemunharaunda, ipapo iwe uri mune inoshamisira nguva mune chero nzvimbo dzinotaurwa pamusoro apa.
pano pa Save A Train, isu tichafara kukubatsira iwe kuwana zvakachipa zvechitima matiketi kune chero ehukuru nzvimbo kuenda pane yedu runyorwa.
Iwe unoda here kubatisa blog yedu positi "7 Off the Beaten Path Destination In Europe" kune yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Foff-beaten-path-destinations-europe%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
antwerp citybreakeurope offbeatenpath offthebeatenpath Train Travel traintravelaustria chitima navi France travelitaly travelswitzerland